ब्रान्डि is भनेको के हो? - Print Peppermint
ब्रान्डि is भनेको के हो?
नोभेम्बर 25, 2018 | ब्रान्डिङ
यस आधुनिक युगमा, त्यहाँ वरिपरि धेरै धेरै हल्ला छ र हरेक कम्पनीले उनीहरूको भविष्यको ध्यान खोजिरहेको छ। र हाम्रो ध्यान अवधि गोल्ड फिशको तह तल घटेको छ। त्यसोभए विश्वभरका यी सबै कम्पनीहरूले प्राप्त गर्न वार्षिक रूपमा अरबौं डलर खर्च गर्छन्। ब्रोशर, बिलबोर्ड, टेलमार्केटिंग, सोशल मिडिया, सशुल्क अनलाइन विज्ञापनमा ठूला पैसा खर्च गर्दै यो कटथ्रोट प्रतियोगितामा खेलमा रहन्छ। यद्यपि हामीले केहि कम्पनीहरू यस भयंकर विरोधमा फस्टाइरहेका देख्छौं। के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि किन? एक शब्द - ब्रान्डिङ.
त्यसो भए ब्रान्डि is के हो?
धेरै व्यक्ति कम्पनीको नाम, लोगोहरू र उनीहरूका नाराका साथ ब्रान्डि conf भ्रमित गर्छन् तर यो त्यस्तो होइन। यी सबै कारकहरूले ब्रान्डि inमा भूमिका खेल्छन् तर यसलाई यी कारकहरू मध्ये एकसँग जोड्नु पर्याप्त छैन। सरल शब्दमा भन्ने हो भने, तपाईंको ब्रान्ड पहिलो विचार हो जुन तपाईंको ग्राहकको दिमागमा आउँदछ जब उनीहरू तपाईंको नाम सुन्छन् वा तपाईंको लोगो देख्दछन्। यसैले ब्रान्डि onlyले महान् नाम, लोगो र क्राफ्टि great उत्तम मार्केटिंग सन्देशहरू मात्र समावेश गर्दैन। यो मूल रूपमा तपाईंको अनुवाद गर्दैछ “किन"तपाइँको कम्पनी को सबै पक्षहरु मा। यदि तपाईं ठूलो ब्रान्ड बनाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन आवश्यक छ:
तपाईं किन गर्नुहुन्छ, तपाईं के गर्नुहुन्छ?
तपाईको कम्पनी को लागी के हो?
तपाइँ केको बारेमा भावुक हुनुहुन्छ?
धेरै जसो कम्पनीहरूले जान्दछन् उनीहरू के गर्छन् तर मात्र ती कम्पनीहरूले एक ठूलो ब्रान्ड बनाउन सक्छन् किन उनीहरूले के गर्छन् भन्ने स्पष्ट समझ संग। कम्पनीको नाम, लोगो, मार्केटिंग सन्देशहरू, ग्राहक सेवाहरू, र तपाईंको सार्वजनिक सम्बन्ध जस्तै सबै कुरा तपाईंको "किन" को एक प्रतिबिम्ब हुनेछ।
सम्बन्धित: कसरी आफूलाई ब्रान्ड गर्ने?
सबैलाई आफ्नो उत्पादन बेच्न कोसिस नगर्नुहोस्
मलाई थाहा छ कि सबैलाई तपाइँको उत्पादनहरू बजार गर्न वा तपाइँको उत्पादनहरू प्रत्येक एकल ग्राहकको आवश्यकता अनुसार दर्साउन अत्यन्तै लोभ्याउने छ। पृथ्वीमा प्रत्येक एकल व्यक्ति कहिल्यै तपाईंको ग्राहक हुन सक्दैन र तपाईंले यो वास्तविकता बुझ्नु आवश्यक छ। वा तपाईंको कम्पनीले यसको अस्तित्वको लागि कम मुनाफा मार्जिन र बढ्दो विज्ञापन लागतको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
तपाईले गर्नु पर्ने कुरा भनेको कम्पनीको सिद्धान्तहरूको सेट परिभाषित गर्नु हो र त्यस्ता विश्वास भएका मानिसहरूलाई मात्र लक्षित गर्नु हो। मलाई थाहा छ यो अवधारणालाई बुझ्नको लागि यो अलि मुश्किल छ तर मलाई यो उदाहरणको मद्दतले तपाईंलाई देखाउँछु।
कसरी एप्पल पृथ्वी मा एक ठूलो ब्रान्ड बनायो?
एप्पल इंक। सम्पूर्ण विश्वमा ठूला कम्पनीहरु मध्ये एक हो र उनीहरु को सम्पूर्ण विश्व मा सब भन्दा वफादार ग्राहकहरु छन्। न त उनीहरूले आफ्ना उत्पादनहरू विश्वका सबै मानिसहरूलाई मार्केट गरे न त उनीहरूले त्यहाँका प्रत्येक व्यक्तिको बजेट फिट गर्न उत्पादनहरू बनाए। तिनीहरू सम्भवत विश्वको सब भन्दा महँगो ब्रान्ड हो र कुनै पनि व्यक्तिले मोबाइल वा कम्प्युटरमा उही सुविधाहरूका साथ उनीहरूले प्रस्ताव गरेको आधा भन्दा कम मूल्यमा खरीद गर्न सक्दछन्।
के यो अनौंठो होइन जब सबै अन्य कम्पनीहरूले विशिष्टता र मूल्यहरूको आधारमा एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् र एप्पलले उनीहरूमध्ये कुनैको पनि वास्ता गर्दैन जस्तो देखिन्छ?
तिनीहरूले विपरित गरिरहेका छन् र अझै शीर्षमा रहनको लागि व्यवस्थित गरियो। त्यो कसरी भयो? के यी सबै नियमहरू एप्पलमा लागू हुँदैनन्? र तिनीहरूले कसरी एउटा यस्तो पंथ-जस्तै निम्न बनाउनको लागि प्रबन्ध गरे कि मानिसहरूले आफूले जे पनि खरीद गर्नेछन्?
यी सबै उत्तरहरू तिनीहरूमा छन् ब्रान्ड रणनीति। स्टीव जॉब्सलाई एप्पलको डीएनएमा भर्ना हुने दिनदेखि नै उसको तरिका थाहा थियो।
त्यसोभए उनीहरू किन हो?
"हामी सबै गर्छौं, हामी यथास्थितिलाई चुनौती दिने कुरामा विश्वास गर्छौं। हामी फरक सोच्न मा विश्वास गर्दछौं "- एप्पल।
त्यसोभए उनीहरूले अनुवाद गरे "किन" तिनीहरूको कम्पनी को लगभग सबै भाग र पक्ष मा। आउनुहोस् हामी तपाईंलाई कसरी देखाउने:
एप्पलले आफ्नो प्रसिद्ध नारा बनायो “फरक सोच्नुहोस्"फिर्ता १ 1997 XNUMX that मा जुन उनीहरूको मूल्य र कम्पनीको विश्वास प्रणालीसँग अनुरूप छ।
जबकि धेरै व्यक्तिहरूले कम्प्युटर कम्पनीका लागि टेकनी नाम सोच्दछन् तर रोजगारहरू होइन। स्टीव वोज्नियाकले एयरपोर्टबाट कामहरू फिर्ता गर्दै थिए जब ऊ ओरेगोनमा स्याउ फार्मबाट भर्खर फर्किए जब जॉब्सले "एप्पल कम्प्युटर" को धारणा राख्यो। जसरी स्टीव जॉब्सले आफ्नो जीवनीमा भने कि नाम रमाईलो, उत्साहित र डरलाग्दो जस्तो देखिन्थ्यो।
सुरुमा एप्पलका सह-संस्थापक रोनाल्ड वेनले कम्पनीको लोगो बनाए। यसले इसाक न्यूटनलाई स्याउको रूखमुनि बसिरहेको चित्रण गरेको थियो। स्टीव जॉब्सलाई यो लोगो मनपर्दैनथ्यो त्यसैले १ 1977 XNUMX मा, रोजगारले रब्ब जानोफलाई काम दिए जो आज हामीलाई थाहा छ लोगोको साथ आएका छन। यद्यपि यो आजको जस्तो लोगो थिएन जुन यसमा इन्द्रेणीको रंगहरू थिए।
यो लोगो मात्र एक द्रुत हिट थियो तर यो मान्छे मा धेरै अनुमानहरु पैदा भयो। केही मानिसहरूले भने कि लोगोमा इन्द्रेणी रंगहरू त्यस समयमा एप्पल द्वितीय कम्प्युटरको रंग क्षमताहरू संकेत गर्न प्रयोग गरियो।
केहीले यो पनि विश्वास गरे कि "काटिएको एप्पल लोगो" आधुनिक कम्प्युटिंगका जनक एलन ट्युरिंगलाई सम्मान थियो। जसले साइनाइड लेस्ड एप्पल खाएर आत्महत्या गर्‍यो किनभने उनको समलिose्गीको कारण तीव्र सतावट सामना गर्दै थियो।
एप्पलले यथास्थितिलाई चुनौती दिए उनीहरूको उत्पादनहरूको मूल्य निर्धारणमा। इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीहरु द्वारा सामान्य धारणा र अभ्यास तपाईं जीत गर्न चाहानुहुन्छ भने कम मूल्यमा अधिक सुविधाहरु प्रदान गर्नु हो। तर, एप्पलले प्रमाणित गर्‍यो कि तपाईं खेलको नियम आफैं बनाउन सक्नुहुन्छ र अझै पनि जित्न सक्नुहुन्छ। एप्पलले अन्य कम्पनीहरूको तुलनामा दुबै भन्दा बढी चार्ज गर्दै छ उस्तै विशिष्टताको उत्पादनको लागि र मानिसहरूले अझै पनि पागल जस्तै एप्पल खरीद गर्छन्।
जे भए पनि यो टिभी व्यवसायिक हो वा उत्पादन सुरूवात, एप्पलले सधैं नियमलाई अस्वीकार गरेको छ। अन्य कम्पनीहरूले के गर्छन् राम्रो प्रविधि, बढी सुविधाहरू, र कम मूल्यहरूको आधारमा उनीहरूको उत्पादनहरू बजारमा राख्दछन् तर एप्पलसँग चीजहरू गर्ने आफ्नै तरिका छ।
एप्पलले कहिले भनेनन् कि हामीसँग सब भन्दा चाँडो र भर्खरको प्रोसेसर, थप उपकरण मेमोरी र हाम्रो उपकरणहरूमा उत्तम क्यामेरा छन्। यसको सट्टा, तिनीहरूको मार्केटिंग सन्देशहरू सँधै उनीहरूको ग्राहकहरूको भावनाहरूको लागि अपील गर्दछ।
'० को दशक ढिलोमा, एप्पलको आइकोनिक "बिभिन्न वाणिज्यिक सोच्नुहोस्”मार्टिन लूथर कि,, जोन लेनन, आइन्स्टाइन र गान्धीलाई श्रद्धांजलि। ती व्यक्तिहरू समाजमा विद्रोहीहरू थिए, विद्रोहीहरू, र मिसफिटहरू; र तिनीहरूले राम्रो को लागी ईतिहासको मार्ग परिवर्तन गर्नुभयो। धेरै व्यक्तिले उनीहरूलाई बौलाहा जस्तो देखे तर “मान्छेहरू जो पागल छन् उनीहरूले सोच्न सक्छन् कि संसार परिवर्तन गर्न सक्दछ प्राय जसो ती व्यक्तिहरू गर्छन्"।
एप्पलले के दावी गर्छ कि उनीहरूले आफ्नो उत्पादनहरू ती मानिसहरूका लागि बनाउँदछन् जो सबै भन्दा फरक छन् र उनीहरूमा विश्व परिवर्तन गर्ने सम्भाव्यता छ। अब मलाई भन्नुहोस्, कसले यस विशेष समूहको हुन चाहन्न?
यो विशेष समूहसँग सम्बन्धको भावना हो जसले मानिसहरूलाई एप्पल उत्पादनहरू खरीद गर्न ड्राइभ गर्दछ। किनभने उनीहरूको मूल्यहरू जति नै फरक पर्दैन, हामी मध्ये धेरैले उनीहरूका उत्पादनहरू यस गुटको एक हिस्सा हुन किन्न चाहान्छौं।
जब स्टीभ जॉब्स १ 1997 XNUMX Apple मा एप्पलमा फर्किए, कम्पनी एकदम डरलाग्दो अवस्थामा थियो र तिनीहरू कम्पनी बन्द गर्न नजिक पुगेका थिए। रोजगारहरू जान्दछन् कि कम्पनीलाई कुल रिब्रेन्डिंग आवश्यक छ र तिनीहरूले धेरै चीजहरू परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। एप्पल स्टोर कन्सेप्ट भित्र एउटा स्टोरमा बढी केन्द्रित थियो जहाँ उनीहरूसँग एप्पल उत्पादनहरूका लागि सेक्शन हुनेछ बेस्ट बाय जस्ता ठूला स्टोरमा। तर त्यो एप्पल को लागी राम्रो काम गरिरहेको थिएन।
तिनीहरूको दृष्टिकोणमा यस असफलताको पछाडि धेरै कारणहरू थिए। लाभ मार्जिन पुनर्विक्रेताहरूको लागि केवल।% थियो त्यसैले उनीहरूलाई एप्पल उत्पादनहरू सिफारिस गर्न कुनै प्रेरणा थिएन। अर्को ठूलो कारण यो हो कि यी स्टोरहरूको बिक्री सहयोगीहरू कसरी एप्पल उत्पादनहरू काम गर्दछन् भन्ने बारे राम्रो प्रशिक्षण थिएन। त्यसकारण तिनीहरू विन्डोज भएको कम्प्युटरलाई बुझाउन बढी झुकाव थिए। र ग्राहक अनुभव पनि राम्रो थिएन।
मे २००१ मा, कम्पनीले यो पहिलो दुई स्याउ स्टोरको उद्घाटन गर्‍यो। पहिलो एप्पल स्टोर फेर्फेक्स काउन्टी, भर्जिनियामा अवस्थित थियो र दोस्रो स्टोर ग्लेन्डेल, क्यालिफोर्नियामा स्थापना भएको थियो।
उद्योग विशेषज्ञहरु र मिडिया पनि पनी यो पहल असफल हुने थियो भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए। किनभने त्यस समयमा, हरेक कम्पनीले यसको लागत कम गर्न कोशिस गरिरहेको थियो त्यसैले सबैले अनलाइन स्टोरहरू बनाउँदै थिए। तर सेब एक पटक फेरि यथास्थितिलाई चुनौती दिएर यसको मूल मानमा सत्य रह्यो।
केवल short छोटो वर्षमा, तिनीहरूले वार्षिक बिक्रीको $ १ बिलियन प्राप्त गरे (खुद्रा इतिहासमा सब भन्दा छिटो)। यस अनुसार खुद्रा बिक्री अनुसन्धान, एप्पल स्टोरहरू प्रति वर्ग फिट अर्थात् $ stores$1 प्रति वर्ग फुटको बिक्रीमा खुद्रा स्टोरहरूमा १ १ स्थानमा छन्।
एक द्रुत समीक्षा
यदि तपाईको एप्पललाई राम्ररी हेर्नुभयो भने उनीहरूको ब्रान्डको प्रत्येक पक्षसँग के हो त्यसमा सत्य "" किन "रहनु पर्छ।" चाहे उनीहरूको नाम, लोगो, स्लोगन, मूल्य निर्धारण मोडेलहरू, मार्केटि or रणनीतिहरू वा एप्पल स्टोरको रूपमा उनीहरूको ग्राहकहरूको लागि अद्भुत अनुभव सिर्जना गर्ने, एप्पलले आफ्नो अनूठा तरीकाले चीजहरू गरे।
एप्पल उत्पादनहरू पनि चीजहरू बिभिन्न तरिकाले गर्नमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रितको प्रमाण हो। जब प्रत्येक मोबाइल कम्पनीले एन्ड्रोइडलाई एक अपरेटि system प्रणालीको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ, एप्पलको आफ्नै आईओएस छ, जुन सिमलेस र प्रयोग गर्न सजिलो छ।
यस उत्कृष्ट ब्रान्डि strategy रणनीतिले एप्पललाई ग्राहकहरूको वफादारी पाउन सक्षम बनाएको छ जुन प्राय सबै कम्पनीहरूले मात्र चाहन्छ। वास्तवमा, तिनीहरूका प्रयोगकर्ताहरूको आधार अधिक एउटा पंथ जस्तो छ जो उनीहरूको सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ताहरू हुन्। एप्पल प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूका उत्पादनहरू प्रयोग गर्दा मात्र गर्व महसुस गर्दैनन् तर उनीहरू सक्रिय साथीहरू र परिवारहरूलाई स्याउ उत्पादनहरूमा स्विच गर्न भन्छन्।
सामसु Even पनि ठूलो कम्पनी हो तर यदि व्यक्तिहरूले हरेक बर्ष नयाँ स्यामसंग मोबाइल किन्नु पर्दछ भने घण्टा लाइनमा कुर्दै, के मानिसहरूले अझै सामसु products उत्पादनहरू किन्नेछन्?
खैर, यो धेरै असम्भव छ। व्यक्तिहरू तिनीहरूबाट खरीद गर्छन् किनकि उनीहरू कम पैसामा अधिक सुविधाहरूका साथ उत्पादनहरू प्रदान गर्दछन्, होइन कि तिनीहरू वफादार छन्। तिनीहरू खुसीसाथ सामसु fromबाट अन्य कुनै कम्पनीमा स्विच गर्ने छन् यदि उनीहरूले यति धेरै असुविधाको सामना गर्नु परेको थियो।
किन ब्रान्डि So यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ?
तपाईं केही ब्रान्डिंग तिर यो सम्पूर्ण दृष्टिकोण को बारे मा केहि प्रश्नहरू हुन सक्छ। केहीको अनुसार, मैले कम्पनीको सफलतामा ब्रान्डि ofको ठूलो प्रभावको बारेमा मेरो कुरा प्रमाणित गर्न केहि तथ्यहरू चिह्न लगाएको हुन सक्छ। ब्रान्डि what भनेको के हो भनेर पहिलो पटक पढ्दा मैले त्यस्तो महसुस गरें।
म विश्वास गर्दछु कि मान्छे धेरै विवेकशील छन् र त्यस्तो कुनै तरिका छैन कि कोहीले महँगो उत्पादन किन्न लागेको छ किनकी उहाँ कम्पनीप्रति वफादार हुनुहुन्छ। यो सिद्धान्तलाई गलत प्रमाणित गर्न मैले यस विषयमा धेरै अनुसन्धान गरे, जसले मलाई प्रमाणित गर्‍यो र मलाई अचम्ममा छोडिदियो।
सम्बन्धित: ब्रान्डि ofका फाइदाहरू के हुन्?
कोका कोला बनाम पेप्सीको युद्ध
यसलाई यहाँ वास्तविक जीवनको साथ प्रमाणित गरौं जुन अनुसन्धानको साथ पनि पुष्टि भयो। १ 1975 XNUMX मा, पेप्सीकोका बजारहरूले "पेप्सी चैलेन्ज" नामको पदोन्नति शुरू गरे जुन यति लोकप्रिय भयो। पेप्सीकोले सार्वजनिक स्थानहरू जस्तै सुपरमार्केटहरू, मल्लहरू, र खेल मैदानहरूमा बूथहरू स्थापना गर्थे र दुई अ people्कित नगरिएको कपबाट प्रत्येकलाई एक सिप्प लिन र उनीहरूलाई कुन मनपर्‍यो भनेर बताउन मानिसहरूलाई आग्रह गर्थे। यी मध्ये एउटा कपमा पेप्सी र अर्को कपमा कोका कोला रहेको थियो।
एक पटक व्यक्तिले आफ्नो प्राथमिकता बताइसके पछि, प्रतिनिधिले उनीहरूको नाम बताउनेछ उनीहरूलाई उनीहरूले मनपराएको पेय देखाउन। पेप्सीको तुलनामा कोका कोलाको बजार हिस्सा ठूलो भए पनि पेप्सीले हरेक ठाउँमा कोका कोलालाई पिटेको थियो।
माल्कम ग्लेडवेलले आफ्नो पुस्तक प्रकाशित गरेझिम्काइ: सोच बिना सोचको शक्ति२०० 2005 मा उनले पेप्सी चुनौतीको सिप टेस्टमा केही गल्तीहरू औंल्याउन केही प्रमाण प्रस्तुत गरे। उनले त्यस्तै अनुसन्धान गरे जसले एकल सिप टेस्टमा मानिसहरु कम पेय पनी रुचाउँदा पनि दुई पेयको मिठाई रुचाउँछन् भन्ने निष्कर्षमा पुगे।
ब्रान्डि Hiddenको हिडन पावर
एक डबल-अन्धा अनुसंधान अध्ययन शमूएल एम। म्याक्क्लुरे र तिनका सहकर्मीहरूले यस सम्पूर्ण घटनालाई राम्ररी वर्णन गर्छन्। तिनीहरू पत्ता लगाउन उत्सुक थिए किन मानिसहरूले यी छनौटहरू गर्छन्। यो अध्ययनको दुई चरणहरू थिए।
पहिलो चरणमा, कोलाको नाम बिना उनीहरूलाई कोला पेय पदार्थहरू दिइन्थ्यो। विषयहरु एक एफएमआरआई (कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग) मेसिनमा राखिएको थियो जुन मस्तिष्कको विभिन्न क्षेत्रमा रगत आपूर्तिमा परिवर्तन रेकर्ड गरिएको थियो। र पेप्सी पनि विजेता थिए। मस्तिष्कको भेन्ट्रल पुटमेन यस चरणमा प्रज्ज्वलित हुन्छ जसले मस्तिष्कको इनाम प्रणाली नियन्त्रण गर्दछ। त्यसैले विषयहरूको ब्रेन किंडाले अन्वेषकहरूलाई (एफएमआरआई मार्फत) भन्यो कि उनीहरू खुशी छन् जब उनीहरूले पेप्सीको स्वाद पाए।
तर दोस्रो चरणमा, केहि अनौंठो र अविश्वसनीय भयो। यस पटक, बिषयहरु कोला को नामको बारेमा बताईएको छ को लागी उनीहरु जान्छन्। यस पटक मस्तिष्कको भागले काम गर्यो भनेर बताईएको वेंट्रल पुटमेन थिएन, बरु, यो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो जसले हाम्रो निर्णयलाई नियन्त्रणमा राख्छ। त्यसोभए, मस्तिष्क वास्तवमै अनुभवको स्वाद थिएन, यो तिनीहरूको विगतका अनुभव सम्झनाहरूको मूल्यांकन गर्दै थियो। यस चरणमा, कोका कोलाले सजिलै पेप्सीलाई हरायो।
के अन्वेषकहरूले यो निष्कर्ष निकाले कि पहिलो चरणमा, विषयहरूको दिमागले कुनचाहिँ कुन रुचि राम्रो छ भनेर बुझ्न प्रयास गरिरहेको थियो। जे होस्, दोस्रो चरणमा जब मानिसहरूलाई कोलाको नामको बारेमा भनियो, दिमागले उनीहरूलाई विचित्रको ब्रान्डको विगतको अनुभव सम्झन थाल्यो। र कोकको स्ट्यान्डआउट मार्केटि campaigns अभियानहरू बनाउने महान् ईतिहास छ जसले निर्णय प्रक्रियालाई असर गर्न सक्छ। यो अध्ययनले ब्रान्डि ofको शक्ति उत्तम तरीकाले वर्णन गरेको छ।
यदि तपाईं अझै पढ्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई ब्रान्डि is के हो भन्ने बारे राम्रो ज्ञान हुनेछ, किन यो महत्त्वपूर्ण छ र कसरी एक ब्रान्ड बनाउने कि वफादारी प्रेरित गर्दछ। तर अन्तमा, ज्ञान मात्र सम्भावित शक्ति हो, यो तपाईको लागि बेकम्मा हुन्छ यदि तपाइँ यसलाई लागू गर्नुहुन्न भने। यसैले म तपाईंलाई यो जानकारी तपाइँको आफ्नो व्यवसायमा लागू गर्न आग्रह गर्दछ ताकि तपाइँले कोका कोला र एप्पल जस्ता ठूलो ब्रान्ड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंलाई आफ्नो कम्पनीको लागि कुनै डिजाइन वा प्रिन्टि services सेवाहरू आवश्यक छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। दुबै हाम्रो डिजाइन सेवाहरू र मुद्रण सेवाहरु हरेक व्यवसायको आवश्यकता पुरा गर्नका लागि डिजाइन गरिएको हो।
? म कसरी बिलबोर्ड डिजाइन गर्ने?
किन ब्रान्डि important महत्वपूर्ण छ? →